रोनाल्डोबाट १ गोलमात्र असम्भव ! | Hamro Khelkud
रोनाल्डोबाट १ गोलमात्र असम्भव !
टुरिन (एजेन्सी)– च्याम्पियन्स लिगमा एट्लेटिको म्याड्रिडमाथि सानदार जितपछि युभेन्ट्सका प्रशिक्षक मासिमिलियानो एलेग्रीले सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । दोस्रो लेगमा रोनाल्डोको ह्याट्रिकमा युभेन्ट्सले एट्लेटिकोलाई ३–० ले हराउँदै टोली अन्तिम आठको यात्रा तय गर्न सफल भएको थियो ।
प्रशिक्षक एलेग्रीले च्याम्पियन्स लिगमा रोनाल्डोले एक गोल मात्रै गर्छन् भन्ने सोच्नु पनि असम्भव भएको बताएका छन् । च्याम्पियन्स लिगको पहिलो लेगमा सम्म यो सिजन रोनाल्डोको नाममा १ गोलमात्र थियो । तर एक खेलले फेरि उनको चर्चा फरक भएको छ । उनको सनसनीपूर्ण प्रदर्शनसहित टोली क्वार्टरफाइनल पुगेको छ ।
एट्लेटिकोसँगको खेलपछि एलेग्रीले रोनाल्डो र बाँकी टोलीको सहकार्यले सफलता मिलेको बताएका छन् । ‘रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगमा एक गोलमात्रै गर्छन् भन्ने सोच्नु पनि असम्भव छ । उनी गोल गर्छन् किनकी पेनाल्टी बक्स भित्र पनि उनी राम्रो खेल्छन्,’ उनले भने, ‘समग्र टोलीले पनि राम्रो गरिरहेको छ । उत्कृष्ट समर्थकहरुको बीचमा टोली उच्च प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ । खेलाडीले इटालियन फुटबलका समर्थकलाई साच्चै उच्च खेल हेर्ने मौका मिलेको छ । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । ‘
प्रशिक्षक एलेग्रीले युभेन्ट्स उपाधिको मुख्य दाबेदार नभएपनि प्रतिस्पर्धी मध्येको एक भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि उपाधि हाम्रो लक्ष्य हो । यदि हामी चाँडै बाहिरिन्छौं भने त्यो पनि असफलता नै त होइन । युभेन्ट्सले हरे वर्ष च्याम्पियन्स लिग खेल्छ । आज पनि त्यस्तै भएको छ । हामी अर्को चरणमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘यदि विभिन्न चरण पार गर्दै अघि बढिन्न भने उपाधि जितिन्न । ‘
इटालियन च्याम्पियनले च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्ने सम्भावनालाई कायम राख्न अझै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने छ । यद्दपी रोनाल्डोको आगमनसँगै टोलीलाई बलियो दाबेदारका रुपमा भने हेरिएको छ ।